ကိုရုပ်ဆိုး ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: July 2008
နေခြည်မှာ အကုန်ဟောင်းလောင်း၊ ငါတို့ စာသင်ကျောင်း
ခရုခွံ ခဏငှားဝတ်တဲ့ ၀င်ကစွတ် ကျနော်
ပွင့်အံခြင်း .... သို့ ... ကြိတ်မနိုင် ခဲမရ ဖြစ်ခြ...
ချစ်သူသိစေဖို့ အမုန်းလက်ဆောင် (၄ သို့ ဇာတ်သိမ်း)
သူငယ်ချင်း လူဆန်းရဲ့ ကဗျာအပေါ် ထပ်ဆင့်ခံစားခြင်း
toi, je veux avoir, justement
အင်တာနက်ဂျာနယ် Vol (9) No (28) စာမျက်နှာ-၁၄ မှ ဟာသလေးတပုဒ်ပါလာတယ်။ ကျနော်တို့လို့ user တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေလို့ ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်ဗျာ။
အို ဘုရားသခင် - ကျွန်တော်မျိုး log on ၀င်တဲ့အခါမှာ စိတ်ပူပန်ခြင်းကင်းအောင် လမ်းပြတော်မူပါ။ ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ browser ကနေ download နဲ့ upload လုပ်စဉ်မှာ ကောင်းမွန်ချောမွေ့အောင် စောင်မတော်မူပါ။ ၀က်ဘ်ဆိုက်က ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ password ကို မငြင်းဆန်ဘဲ ဆက်သွယ်မှုအမြဲကောင်းနေပါစေ။ နည်းပညာထောက်ပံ့ကူညီမှုဟာ ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ အနီးအနားမှာ အမြဲရှိနေပါစေ။ ကျွန်တော်ရဲ့ ပရိုဂရမ်တွေဟာ ပြဿနာမဖြစ်ဘဲ အမြဲ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေ။ Hard drive ဟာလည်း အမြဲ backup လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါစေ။ ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ကွန်ပျူတာဟာ virus, worm, spyware နဲ့ Malware တွေ အမြဲကင်းဝေးပါစေ အရှင်ဘုရား။ ......... MZ
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား1:06 PM4ထင်မြင်ချက်(များ)
သင် သိပ်ကြိုက်ပေမယ့် အဝေးတနေရာမှာ ၀ယ်မရတဲ့ မြန်မာဝတ္ထုစာအုပ်များ ရှိပါသလား ? (အိမ်သာတက်ရင်း ဖတ်ချင်တဲ့လူနှင့် အဆင်မပြေပါ၊ လက်တော့ (Laptop)ပါ သယ်နိုင်ရင်တော့ မဆိုလိုပါ :))
သင် သိပ်နားထောင်ချင်ပေမယ့် ပါမသွားတဲ့ မြန်မာသီချင်းလေးများ ရှိပါသလား ?
သီချင်းစာသားတွေကိုကော အလိုရှိပါသလား ?
လွယ်ပါတယ်။ မစုံပေမယ့် .... စုံသလိုလိုပါ ...။
အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း သင်, သွားရောက် လည်ပတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ ...
သင်, သိနေတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နာလည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ် ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်, လိုလားနေတဲ့ စာအုပ် (၀ါ) သီချင်တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရှုနားဆင်ခွင့် ရနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျနော် ကိုရုပ်ဆိုး လမ်းညွန်ရကျိုးနပ်မှာပါ ....။
၁) MMA - Myanmar MP3 Albums
၂) Myanmar E-Books
၅) Lyrics Myanmar
စာကြွင်း။ ကြော်ငြာလမ်းညွန်များ၊ တီဗီကြော်ငြားများကြည့်ရင်းမှ ဒီစကားလုံးများ ရရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား1:49 PM4ထင်မြင်ချက်(များ)
စာရေးဆရာ “ပေါ်ဦးသစ်”ရဲ့ “ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော လေးဖြူ”ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးထဲက (စာမျက်နှာ ၈၅-၈၆)မှာ လေးဖြူရဲ့ ပေးစာလေးကို ဖော်ပြထားတယ်။ သူ့ရဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်က ခံစားမှု တစွန်းတစ လှစ်ပြထားတာကို ဖတ်မိတဲ့အခါ ကျနော့ ဘလော့ခ် ပေါ်မှာ တင်ချင်တဲ့စိတ်ကလေး ဖြစ်ပေါ်လာလို့ ဒီ ပို့စ် လေးကို တင်လိုက်တာပါ။ အဆိုတော် အနုပညာရှင်တယောက်ရဲ့ စကားလေးပေါ့ဗျာ ...
ကျေကျေနပ်နပ် ပေးဆပ်ရတာများလွန်းရင် မကောင်းဘူး။
ဒါကိုတော့ ခါးသီးတဲ့ အတွေ့ ရှိသူတိုင်းတော့
တစ်ခါတစ်ခါ သူကရော (ကိုယ့်လိုမျိုး)
အဲဒါကို ငါတို့ မေ့မေ့နေတာ များတယ်လေ။
ဟုတ်လား ...၊ မဟုတ်ဘူးလား ...။
ကိုယ်ပေးတဲ့အခါ သူက မယူချင်သလို ဖြစ်နေရင်
ငေါင်ငေါင်သွားရတဲ့အခါမျိုးမှာ သူ့ကို အားမရဘူးဖြစ်တယ်။
အဲတာ မှားတယ်။ (လုံးဝဘဲ)
သူကလည်း ကိုယ့်လိုဘဲ တစ်ချိန်ထဲမှာ ပေးဆပ်ချင်နေရှာတယ်လေ။
အဲဒါကို မယူတတ်ခဲ့ကြလို့ ... အရှင်းပြောရရင် (မချစ်တတ်ခဲ့လို့)
သူ့အပြစ် မဟုတ်ဘူး သူငယ်ချင်း ...။
ကိုယ့်အပြစ်တွေ အများ ... အများကြီး ပါတယ်။
ချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ချစ်တတ်တယ်ဆိုတာ အပုံကြီးကွာတယ်။
မင်း ချစ်တတ်သလားလို့ မေးချင်တယ်။
... ချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ချစ်တတ်တယ်ဆိုတာ အပုံကြီးကွာတယ် ... တဲ့။ ဟုတ်တယ်ဗျာ။ ဒီစာသားလေးရဲ့ စွဲဆောင်မှုကြောင့် ဘလော့ဂ်မှာ တင်ဖြစ်တယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ကိုရုပ်ဆိုး
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား5:40 PM4ထင်မြင်ချက်(များ)
၁၉ ဇူလိုင် မမေ့နိုင်
လွပ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား4:44 PM0ထင်မြင်ချက်(များ)
ကျနော် မနေ့က “ကွန်ဒိုင်း”ဆိုတဲ့ ရွာကလေးကို ကြိုတင်လေ့လာရေးခရီးအဖြစ်နဲ့ သွားခဲ့တယ်။ ပထမ တခေါက် လှူ ဖူးတယ် ၂၉ မေလ၊ ၂၀၀၈ တုန်းက (ပုံလေးတွေ ဒီမှာ)။ ကျနော် မနေ့က တခေါက်ရောက်တော့ ပြောင်းလဲနေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တာ ပထမ သွားတုန်းက အိမ်လေးတွေအတိုင်းပဲ။ အသစ် ပြန်မဆောက်နိုင်လို့ စုပေါင်း နေ,နေရတုန်းပဲ။ ကျနော်တို့အဖွဲ့ကလည်း အိမ်ပြန်ဆောက်ပေးမလို့ဆိုတော့ ၀မ်းနည်းပေမယ့် အတော်ဖြစ်သွားတယ်။ လှူချင်တဲ့ အရေအတွက်နဲ့ လိုနေတဲ့ အရေအတွက် က အတူတူပဲဆိုတော့ ... ၀မ်းသာသွားမိတယ်။
စာသင်တဲလေးသွားတွေ့မိတယ် (စာသင်ကျောင်းမဟုတ်ပါ။)။ သူငယ်တန်းကနေ သုံးတန်းအထိ ကျောင်းသား/သူ (၁၅)ယောက်ရှိတယ်။ ၈ ပေ ပါတ်လည် တဲကလေးမှာ တကုန်းကုန်းနဲ့ စာသင်နေကြတာ။ ဆရာမကလည်း အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်ဘဲ၊ အဲဒီ ရွာက စာတတ်ပေတတ် အမကြီး။ blackboard မရှိ၊ စာအုပ်မစုံ၊ ကြုံသလို သင်နေရတာ။ ကျနော် စုံစမ်းကြည့်တော့ သူ စာသင်နေတာ ၁၃ နှစ်ရှိပြီတဲ့။ ဒီရွာနဲ့ ကျောင်းရှိတဲ့ ရွာက အလှမ်းဝေးတော့ မိဘတွေကလည်း လှေနဲ့ လိုက်မပို့နိုင်၊ သူငယ်တန်းကနေ လေးတန်းအထိသာ ရှိတဲ့ ကျောင်းဆိုတော့ ကလေးတွေကလည်း အရွယ်ငယ်၊ ကိုယ့်ဘာသာကို ကျောင်းမသွားနိုင်တဲ့အရွယ်။ အဲဒီတော့ ရွာမှာပဲ သူက စာသင်၊ တစ်လ တစ်ခေါက် ကျောင်းရှိတဲ့ ရွာကို သွားဖြေ၊ အဲဒီလို လုပ်နေရတာတဲ့။ ၃-တန်းအောင်၊ ၄-တန်းကျောင်းသား တစ်ယောက်ရှိတာ နာဂစ်မှာ ဆုံးသွားတယ်တဲ့ မျက်ရည်လေး တစမ်းစမ်းနဲ့ပေါ့။ သူ့ရဲ့ ကျောင်းသားကိုး။ နောက်ထပ် ပြောသေးတယ် အခု စာသင်တဲမှာ ကာထားတာတွေက အရင် ကျနော်တို့ လှူသွားလို့သာတဲ့၊ နိုမို့ဆို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မှန်း မသိဘူးတဲ့။
ကျနော်လည်း ဘာ ဆက်ပြောရမှန်းမသိ ကြက်သေ, သေသွားခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ စာသင်ကျောင်းအတွက်ပါ အဓိကထားဆွေးနွေးပြီး၊ စာသင်ကျောင်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေး ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးကြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
နေထိုင်ဖို့ တဲလေးတွေအပြင်၊ စာသင်တဲမှသည် စာသင်ကျောင်းလေးပုံစံ ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပေးရမယ်။
နေပူကြီးထဲ လှေငယ်လေးနဲ့ မြစ်ပြင်ဖြတ်၊ ထမင်းတနပ်လွတ်၊ ကြောက်ရွံ့စွာသွားခဲ့ရပေမယ့် ဒီလိုမျိုး ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ပင်လယ်ကြီးလည်း ဖြတ်ပြီး နောက်ထပ် သွားဦးမယ်ဗျာ .... အခုလို နေရာမျိုးလေးတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ အိမ်အပြန် ထမင်းတောင် စားဖို့ အနိုင်နိုင်ရယ် ... ငါ့မှာတော့ blog မလား ? chat မလား ? သူတို့မှာတော့
ငါတို့ စာသင်ကျောင်း” လို့များ ရွတ်နေပြီလား မသိ .....
၁၆ ဇူလိုင်၊ ၀၈ ခရီးသွားမှတ်တမ်း မှ ထုတ်နုပ်ရေးသားသည်။
(၁၇ ဇူလိုင်၊ ၀၈) ၁၈း၃၂ မိနစ်
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ6း:18 PM4ထင်မြင်ချက်(များ)
တခါတရံ ကိုယ်ကိုတိုင် ခံစားခဲ့ရပါလျက်နဲ့ ပြန်မပြောပြတတ်၊ သရုပ်မဖော်တတ်ခဲ့တာတွေ အများကြီးပါ။
ဒါပေမယ့် ...... တိုက်ဆိုင်စွာ နာမည်ကြီးစာရေးဆရာ ၀တ္ထုထဲမှာ ပြန်လည်ဖတ်မိလို့၊ ထင်ရှားတဲ့ ကဗျာဆရာ/မ ကြီးတွေရဲ့ ခံစားမှု ကဗျာလေးများနဲ့ တိုက်ဆိုင်သွားတာမို့၊ အဖြစ်အပျက်က ကြာခဲ့ရင်တောင်မှ (မေ့ခဲ့ရင်တောင်မှ) အသစ်တဖန်ပြန်လည် ခံစားစေခဲ့တဲ့ အစွမ်းအစတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ သူငယ်ချင်းများ လက်ခံကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျနော်ကိုယ်တိုင် တနုံ့နုံ့ ခံစားနေရပါလျက်နဲ့ မြင်သာအောင် မရေးဖွဲ့နိုင်၊ မပြောပြနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ”ဝေလေး” တယောက်က “ငါ့အဖြစ်…..ငါ့အတွေး”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဘလော့ မှာတင်ထားတာလေးကို ကျနော် ဖတ်လည်း ဖတ်မိကော .....
မူရင်းကဗျာဆရာမရဲ့ blog ကို လည်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဒီမှာ
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား8:10 PM0ထင်မြင်ချက်(များ)
ငါ, ဒီမနက် အိပ်ယာနိုးတော့
ကျေးဇူးပါ ကလေးငယ် …။
ဖုန်တွေတောင် တက်လို့ ….။
(၁၄ ဇူလိုင်လ၊ ၀၈) ၂၃း၁၄ မိနစ်
ဖြတ်ခနဲ ခုန်ထွက်သွားတဲ့ စကားလုံးတွေပါ ....။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား1:38 PM3ထင်မြင်ချက်(များ)
ပွင့်အံခြင်း .... သို့ ... ကြိတ်မနိုင် ခဲမရ ဖြစ်ခြင်း
ဒီကိစ္စမှာ .............. ငါမမှားဘူးလို့ ထင်တာပဲ။
ဒါပေမယ့် ............. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
အို .... အသင် လောက
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား5:15 PM 1 ထင်မြင်ချက်(များ)
G-talk ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ စာလေးပါ။ ဝေမျှချင်တာနဲ့ တင်လိုက်တာ။
၅) ရင်ထဲကို ၀င်ကြည့်ပါလား။
၇) ရက်ပါတ်လုံး မင်းကိုလွမ်းလို့
ကျနော် ထပ်တိုးထားတာက -
၈) လို့တော့ မ--ဲ နဲ့ကွာ။
၉) အကြောင်းသိတယ်မလား ... :)
ဒီနေ့မနက်ပဲ သူငယ်ချင်းတွေ ထပ်ဖြည့်ပေးသေးတယ် ...
၁၀) ခါ နမ်းပစ်လိုက်မယ် ... :)
ကျန်တာတွေတော့ Access has been denied
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား4:14 PM4ထင်မြင်ချက်(များ)
Dream ရဲ့ စကားစုလေးပါ။
“၀တ္ထုတစ်ပုဒ်၏ရှေ့ဖြစ်မည့်ဇာတ်လမ်းကို စာမျက်နှာကျော်ဖတ်လို့ရနိုင်သော်လည်း၊ ဘ၀၏စာမျက်နှာကို ကျော်ဖတ်လို့ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။”
နောက်ပြီး ညွှန်းထားသေးတယ် …
"အတိတ်တွင်အလုပ်လုပ်လို့မရ၊ အနာဂတ်တွင်လည်း အလုပ်လုပ်လို့မရ၊ ပစ္စပ္ပုန်မှာသာ အလုပ်လုပ်လို့ ရလေသည်" တဲ့။
ဟုတ်တယ်ဗျာ။ မနက်ဖြန် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတောင် မသိကြသေးတာ။
အဲဒီတော့ Happycloud1000 ရေးထားသလို ….
Learned from yesterday, Live for today and Dream for tomorrow...
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ6း:38 PM2ထင်မြင်ချက်(များ)
ကျနော့ရဲ့ “ချစ်သူသိစေဖို့” ကဗျာဆက်ကို နားလည်မှုမျက်လုံး၊ သိတတ်တဲ့ဦးဏှောက်နဲ့ ဖတ်ရှုခံစားပေးခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ၊ ကော်မန့် ပေးခဲ့သူများအားလုံး ဆက်လက်၍ ဒုက္ခတကြီး ဖတ်ရှုစရာ မလိုတော့အောင် ယနေ့ ကျနော် အပြီးသတ် “ချစ်သူသိစေဖို့ အမုန်းလက်ဆောင် (၄ သို့ ဇာတ်သိမ်း)” ကဗျာတပုဒ်အား ဖျစ်ညှစ်ရေးခဲ့ပြီးသကာလ၊ ကျနော်၏ ဘလော့ဂ်ပေါ်သို့ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ :)
မှတ်ချက်။ ။ နာမည်ကျော်ကဗျာဆရာတယောက်ဟန်နဲ့ နိဒါန်းပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်က ကဗျာမှာ ကိုယ်ကိုတိုင် ဖတ်လို့မကောင်းပါ :P
နင် …… နင်, နင် ဘာပြောလိုက်တယ်။
မေ့ပစ်လိုက်ရမယ် ….။ ဟုတ်လား …။
ငါ နင့်ကိုချစ်ခဲ့တာလေ မေ့ပစ်ဖို့မှ မဟုတ်တာ။
ငါ့ရဲ့ နှလုံးသွေးတွေ ပေကျံလျှက်ပေါ့…။
နင့်ကို ချစ်တယ် ပြောဖို့
သတ္တိတွေ မွေးခဲ့ရတာ ခဏခဏ
နင့်ကို အရမ်းချစ်လို့ …
နင့်အပေါ် အရမ်းသိတတ်လို့ …
ဘယ်နှုတ်ဖျားက ပြောခဲ့တာလဲကွယ် …။
ချစ်သူ …. လို့
ငါ … သိပ်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ လူတယောက်
အခုတော့ … ရတန်ကောင်းပါပြီကွယ်။
နင် … ငါ မုန်းတဲ့ နင်
ငါ့ရဲ့ နှလုံးသားပေါ်က နင့်နာမည်ကို
ငါ ည, က ရေးပစ်လိုက်တယ်
နာမ အဖြစ်နဲ့သာ တည်ရှိတော့ကွယ် …။
(၁၀ ဇူလိုင်လ၊ ၀၈) ၁၅း၀၀ နာရီတွင် အပြီးသတ်သည်။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ3း:08 PM3ထင်မြင်ချက်(များ)
ကျနော့သူငယ်ချင်း “လူဆန်း”ဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်နဲ့ မော်ဒန်ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ People မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါလာတဲ့ သူ့ရဲ့ကဗျာ “နာမည်တွေ”ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကိုဖတ်မိပြီးနောက် ခံစားမိလို့ ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေး တပုဒ်ပါ။ လူဆန်းရဲ့ မူရင်းကဗျာကို ဒီမှာ ရယူနိုင်တယ်ဗျ။
နာမည်တွေ … တဲ့
… စတာ တွေ။
နာကျည်းမှု၊ ကြည်နှုးမှု၊ လွမ်းဆွတ်မှု
ဘာကိုမှ မတွေ့ရတော့ဘူး …။
အားလုံးဟာ … စာရွက်ပေါ်က နာမည်တွေပဲ။
သူ့နာမည်ကို ချရေးလိုက်လေ …
စာရွက်ပေါ်က နာမည်တစ်ခု ဖြစ်သွားမယ်။
(၁၅ ဇွန်လ၊ ၀၇) ၁၃း၃၂ မိနစ်
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား4:05 PM2ထင်မြင်ချက်(များ)
ငါ … လိုက်ပါ စောင့်ရှောက်ပါရစေ …။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား11:25 AM5ထင်မြင်ချက်(များ)
ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်စာ ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေကို လုပ်နေရင်း အမှတ်မထင် ရေးဖြစ်သွားတဲ့ ပြင်သစ်လို ကဗျာလေးတပုဒ်ပါ။ မြန်မာလို ပြန်ဆိုထားပေမယ့် ကာရံမညီနေတာကိုတော့ နားလည်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
boir,acause de toi, exactement
noir, c'est ma vie, sans espoir
မင်း, ငါ ပိုင်ဆိုင်ချင်ဆုံးပေါ့, အမှန်ပါ …
သောက်, မင်း ကြောင့်လေ, အတိအကျပေါ့ …
အမှောင်, ငါ့ဘ၀လေ, မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခဲ့ပေါ့ …
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား2:51 PM2ထင်မြင်ချက်(များ)